ဂိုဒေါင်သတ္တုသိုလှောင်မှု pallets များအတွက် Logistic သံမဏိ pallet - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသတ္တုသိုလှောင်ပစ္စည်းသတ္တုကွန်တိန်နာ,ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း,Pallet,ထိန်သိမ်း,roll ကွန်တိန်နာ etc
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » သံမဏိ pallet » ဂိုဒေါင်သတ္တုသိုလှောင်မှု pallets များအတွက် Logistic သံမဏိ pallet
ဂိုဒေါင်သတ္တုသိုလှောင်မှု pallets များအတွက် Logistic သံမဏိ pallet
မျက်နှာပြင်ကုသမှု: သွပ်ရည်စိမ်အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း /
လျှောက်လွှာဧရိယာ Transport,ကုနျလှောငျရုံ,industrial etc
loading စွမ်းရည် Below 1000kg load capacity
စုပုံထား 1+3 အလွှာ
မေး: အဘယ်မှာရှိသင့်ရဲ့စက်ရုံတည်ရှိရာ? အဘယ်သို့ငါအဲဒီမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်?
မေး:ငါs ကိုထုံးစံized ရရှိနိုင်?
တစ်ဦးက: 1. အာမခံချက်: —3အမှု၌ ~ 10 နှစ်အာမခံကြောင်း
စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းတစ်ဦးကသင့်လျော်ကိုင်တွယ်, မှန်ကန်စွာ forklift ကိုင်တွယ် stacking စဉ် / ကို un-stack
B ကို Overload တားမြစ်သည်
ကို C ပတ်ဝန်းကျင်တောင်းဆိုမှုကို -indoor, ခြောက်သွေ့စိုစွတ်သောမဟုတ်ဘူးအခြေအနေ, မဆိုတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဓာတုပစ္စည်းနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ပါဘူး (ဇင့်ချထားတဲ့နှင့်အမှုန့် coated ထုတ်ကုန်များအတွက်, အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးပူသို့ကျဆင်းလာများအတွက်န့်အသတ်မရှိ,).
သတ္တု pallet, သတ္တု pallet